Akụkọ - Ụlọ ọrụ ụlọ ịsa ahụ zuru ụwa ọnụ ruo 2029 - site na ụdị ihe, ngwa na ọdịdị ala - ResearchAndMarkets.com
Ụlọ ọrụ ụlọ ịsa ahụ zuru ụwa ọnụ ruo 2029 - site na ụdị ihe, ngwa na ọdịdị ala - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN – (WIRE Azụmahịa) – “Azụmahịa ụlọ ịsa ahụ, oke ahịa, nyocha ngwa, echiche mpaghara, ọnọdụ uto, ndị egwuregwu isi, atụmatụ asọmpi na amụma amụma, 2021 ruo 2029” agbakwunyere na onyinye ResearchAndMarkets.com.
Ihe efu nke ime ụlọ ịwụ site na acrylic ma ọ bụ melamine elu
Kabinet ụlọ ịsa ahụ enweela nnukwu nhazi yana ọganihu teknụzụ n'ime iri afọ ole na ole gara aga na-ebute ọmarịcha nhazi na nhazigharị. Ọ bụ ihe karịrị afọ iri gara aga mgbe ndị na-ekiri ihe na-emekarị malitere ịhụ mkpali mbụ nke ntinye nke ngwá ụlọ n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ. Taa, nke a bụ ụkpụrụ omume, nke nwere ụdị ngwá ụlọ dị iche iche mara mma na nke na-adịgide adịgide n'ahịa, nke e mere kpọmkwem maka ngwa ụlọ ịsa ahụ.
Achọrọ Omenala n'Achọrọ ịmanye ọrụ na-abịa
Ahịa ụlọ ịsa ahụ zuru ụwa ọnụ na-enwe uto na-adịghị mma n'ihi ọrụ mmepe ụlọ na-arị elu, nke chọrọ ihe eji enyere ndụ aka. Mmụba n'ọchịchọ maka akụrụngwa countertop ahaziri iche dị ka nkume injinia, nkume lava, granite, marble, wdg n'ihi ụdị dị iche iche, ọnụahịa ọnụahịa na aza ajụjụ nke ngwaahịa ndị a na ngwa ụlọ ịsa ahụ na-atụ anya ịkwalite uto ahịa n'oge amụma. Agbanyeghị, ọnụahịa dị elu nke ngwaahịa dị elu, ọnụ ahịa imewe dị elu yana a na-atụ anya na ọ ga-egbochi uto ahịa ụlọ ịsa ahụ n'ime oge amụma. Akuko a kpuchiri ihe niile dị otú ahụ nha na ọnụọgụ nke ahịa ụlọ ịsa ahụ ma na-enyochakwa mmetụta ndị isi ọkwọ ụgbọ ala, mgbochi, ihe ịma aka, ohere na uto ahịa.
Ngwa obibi & Cabinets osisi na-achịkwa ego ahịa ahịa
Dabere n'ụdị ihe, a na-ekewa ahịa ụlọ ịsa ahụ zuru ụwa ọnụ n'ime osisi, ceramik, igwe, iko na ihe okwute. N'ihe gbasara ntinye ego, akụkụ osisi nwere oke òkè nke ahịa ụlọ ịsa ahụ. Ọ nwetara 41.95% òkè ahịa na 2020. E nwere ụdị osisi dị iche iche dị ka MDF, plywood, ma ọ bụ chipboard, wdg eji maka iwu ụlọ ịsa ahụ. A na-atụ anya na ịnweta MDF dị mma (Ọkara-Density Fibreboard) ga-eme ka ọchịchọ maka kabinet osisi dị nso n'ọdịnihu dị nso. N'ihe gbasara ntinye ego na-enweta n'etiti mpaghara applicaton, ngwa obibi bụ nnukwu òkè nke ahịa ụlọ ịsa ahụ.
Akụ na ụba na-emepe emepe ka dị ka ebe isi
N'afọ 2020, a hụrụ Asia Pacific dị ka ahịa kachasị maka ụlọ ịsa ahụ. A na-ekwu na uto a bụ mmụba na-arị elu sitere na akụ na ụba na-emepe emepe dị ka China na India n'ihi nnukwu ụlọ ọrụ na-emepe emepe na mmepe akụrụngwa na mba ndị a. Mpaghara Asia Pacific nyere aka na 36.22% ego ha nwetara na 2020. Mpaghara a na-atụ anya ịhụ ọnụego uto kachasị elu nke 6.4% n'ime oge amụma. North America bụ mpaghara nke abụọ kachasị na ahịa ụlọ ịsa ahụ zuru ụwa ọnụ maka oke ego ha nwetara na 26.06% na 2020.
Ebumnuche gọọmentị iji gbanyụọ mmetụta Covid
Ahịa ụlọ ahịa ozugbo dara site na pasenti 29 n'ụwa niile ruo ihe ruru ijeri US $ 320 na ọkara mbụ na 2020. Isi ihe kpatara ọdịda ahụ gụnyere mkpọchi njem nke metụtara itinye ego n'oke oke. Ya mere, atumatu itinye ego obere oge ka ebigharịrị ma ọ bụ kagbuo. Agbanyeghị, na mba ndị dị ka Japan, Germany na South Korea ọnọdụ ahụ ka dị mma. Japan debara aha uto nke 7% n'ihe gbasara itinye ego YoY. Germany gosipụtara mbelata ihe dịka 1%, ebe South Korea na-agbada site na 15%, ọ ka dị mma karịa ogologo oge ọkara afọ mbụ. Atumatu gọọmentị na-abawanye na-atụ anya na ọ ga-ebuba ahịa ahụ. Ọtụtụ mba dị ka India enyela ngwugwu akụ na ụba, mmụba na usoro iheomume maka mmecha nke ọrụ owuwu, mbelata repo, wdg enyerela ụlọ ọrụ ezigbo ụlọ uru.
A zara ajụjụ ndị bụ isi na akụkọ a
● Gịnị bụ akụkọ ihe mere eme, ugbu a na atụmatụ nha ahịa ahịa ụlọ ịsa ahụ zuru ụwa ọnụ n'ime oge site na 2019 ruo 2029?
● Kedu CAGR nke ahịa ụwa ga-aga n'ihu n'oge amụma site na 2021 ruo 2029?
● Gịnị bụ mmetụta covid 19 na-akpata n'ahịa ahịa na usoro ahịa?
● Olee ụdị ngwaahịa a na-achọkarị n'ụwa nile, n'ihi gịnị?
● Gịnị bụ akụkụ ngwa ngwa na ụlọ ịsa ahụ zuru ụwa ọnụ?
● Olee ihe àmà na-egosi na a na-achọkarị ihe n'ahịa zuru ụwa ọnụ?
● Gịnị mere Eshia Pasifik ji na-agba àmà nke ọma n'ahịa?
Isi nke 1 Okwu mmalite
Isi nke 2 Nchịkọta Executive
Isi nke 3 Global Bathroom Cabinets Overview Market
3.1 Nkọwa ahịa na oke
3.2.1 Ndị ọkwọ ụgbọ ala
3.2.1.1 Na-arị elu mmasị ndị ahịa na ndozi ụlọ ịsa ahụ na ịke
3.2.1.2 A na-atụ anya na ego a na-akwụ ụgwọ na-ebili ga-eme ka ọnụ ụlọ ịsa ahụ dịkwuo elu
3.3.1.1 ọnụahịa adịchaghị nke ngwaahịa dị mma
3.3.2.1 Na-abawanye mmefu ndị ahịa nke ngwaahịa ime ụlọ ịwụ ọhụrụ
3.3.3 Atụmatụ itinye ego n'ahịa, site na ụdị ihe
Isi nke 4 Global Bathroom Cabinets Market nha, site na ụdị ihe
Isi nke 5 Global Bathroom Cabinets Market nha, site na ngwa
Isi nke 6 Global Bathroom Cabinets Market, Site na Geography
Isi nke 7 Profaịlụ ụlọ ọrụ
Maka ozi ndị ọzọ gbasara akụkọ a, gaa na https://www.researchandmarkets.com/r/u131db